ထုတ်ကုန်စက်ရုံ | လက်ကားကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
OEM ODM စက်ရုံကိုတိုက်ရိုက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောဖုန်မှုန့်နှင့်မျက်နှာဖုံး၊
မျက်နှာဖုံးတွင်အမျိုးမျိုးသောမျက်နှာပုံစံနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တပ်ဆင်နိုင်သောနားကြပ်များတပ်ဆင်ထားသည်။ ရေချိုးနိုင်သောညစ်ညမ်းသောမျက်နှာဖုံးကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘက်စုံသုံး - ဤဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးကိုအိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေး၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ လက်သမား၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊
TP830042 နောက်ဆုံးပေါ်အရည်အသွေးမြင့်5အစိုင်အခဲအရောင် sexy တစ်အပိုင်းအစပတ်တီး bikinis အမျိုးသမီးရေကူးဝတ်စုံဆွဲပြီးရေကူးဝတ်စုံ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: TP830042 နောက်ဆုံးပေါ်အရည်အသွေးမြင့်5အစိုင်အခဲအရောင်ရှိပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာအပိုင်းအစအသားကပ်ဘောင်းဘီအစရှိသည်များရေကူးဝတ်စုံဒီဇိုင်းရေကူး ၀ တ်စုံအထည်အမျိုးအစား: polyester / spandex အရွယ်အစား - S, M, L တပ်ဆင်မှု - ပါးလွှာသောအင်္ဂါရပ်များ - နူးညံ့ပျော့ပျောင်း။ သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။ အခါသမယ: သဲသောင်ပြင်အရွယ်အစားဇယား: အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) ဖလား Bust ခါး S ကို AB 74-80 64-66 M ဘီစီ 78-85 68-70 L ကို CD 82-90 72-74 နွေးထွေးသောသိကောင်းစရာများ: 1. အထက်တိုင်းတာကိုးကားဘို့သာ။ 1-3cm ခြားနားချက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ 2. ကြောင့် scre ...
TP830043 bikini 2021 ထုတ်လုပ်သူတန်ဖိုးနည်း sexy backless နက်ရှိုင်းသော v ရင်ဘတ်အစိုင်အခဲအရောင်ခြယ်သသည့်ရေကူး ၀ တ်စုံ
ဒီဇိုင်းဆန်း V-neck အစိုင်အခဲအရောင်ခြယ်သုတ်ပွင့်ရေကူးဝတ်စုံ၊ အရည်အသွေးမြင့်သောပိတ်ထည်များကို elastic၊ အရေပြားနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ဖက်ရှင်၊ ကမ်းခြေရေကူးကန်များအတွက်လိုအပ်သောရေကူးဝတ်စုံတစ်ခု။ ပျော်ရွှင်စရာရေကူးဝတ်စုံသုံးပွဲကျင်းပခွင့်ပေးပါ။
TP830047 လက္ကားထုံးစံ OEM sexy လက်ရှည်နံရိုးနံရိုးအမျိုးသမီးများ Rpmper တစ်ဖဲ့ယောဂ Jumpsuit အမျိုးသမီး 2021
အရည်အသွေးမြင့်သောပိတ်ထည်၊ elastic၊ အသားအရေနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ နူးညံ့။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဒီဇိုင်းဆန်းဒီဇိုင်းဆန်းလက်ရှည်ရှပ်အင်္ကျီအကျီင်္ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်း။ ရင်ဘတ်အားဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပုံဖော်ခြင်း၊ အ ၀ တ်အစားများခြင်း၊ လိင်ခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်း၊ နိုက်ကလပ်များ၊ ပါတီများ၊ ကလပ်များ၊ ကော့တေးပါတီများ၊ ညနေခင်းအားကစားပွဲများ၊ နွေရာသီအားကစား၊ ယောဂ၊ အားကစား၊
TP830048 ထုံးစံ OEM ဆောင်း ဦး ရာသီမြင့်ခါး sexy ရှည်ရှည်လက်လက်ချောင်းလည်ချောင်းသေဆုံးအမျိုးသမီး rompers အမျိုးသမီးဝတ်ဒီဇိုင်းဆန်း
ရောင်စုံရောင်စုံပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ ဖက်ရှင်တင့်ကားများ၊ sexy ပုံကိုပြသသည့်ခါးရှည်ရှည်အင်္ကျီဘောင်းဘီရှည်ဒီဇိုင်း။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောအထည်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဤဒီဇိုင်းကိုယ်ထည်သည်အလွန်နူးညံ့ပြီးရဲရင့်စွာလန်းဆန်းစေသောညတစ်ညအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
TP830049 ပေါင်းအရွယ်အစားနောက်ဆုံးပေါ်စတိုင်သစ်နွေညှို့လက်ရှည်လည်ပတ်ကာကြံ့ခိုင်ရေးအမျိုးသမီး ၀ တ်စုံဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းနာ ​​2021
အသစ်ရောက်ရှိလာသည့်ချည်ရောင်အမျိုးသမီးများ Plus အရွယ်အစားဂါ ၀ န်များ XL 3XL ပုံနှိပ်ခြင်းပါတီနိုက်ကလပ် Rompers လက်ပြတ်အကျီင်္လည်ပင်းကျပန်း Jumpsuits | -၊ စျေးပေါသောရင်ကျပ်၊ အရည်အသွေးကောင်းသည့်အမျိုးသမီးအဝတ်အထည်များကို ၀ ယ်သူများထံမှတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ပါ။ အသစ်ရောက်ရှိလာသောလည်စည်းအမျိုးသမီးများ Plus အရွယ်အစား Jumpsuits XL 3XL ပုံနှိပ်ခြင်းပါတီနိုက်ကလပ်ရင့်ရောင်လက်ပြတ်ဘောင်းဘီလည်ရှည်ကျပန်းရှူးဖိနပ်အကျီင်္၊ အမျိုးသမီးအဝတ်အထည်၊ စျေးပေါသောဝတ်စုံ၊ အရည်အသွေးမြင့်အမျိုးသမီးများ၏အဝတ်အထည်များ , Jumpsuits ။
China Supply အမျိုးသမီးဘောလုံးအားကစား ၀ တ်စုံတင်းနစ်စကတ်ကိုဖုန်းအိတ်ကပ်ထဲထည့်ထားသည်
အားကစားစကတ် ၁ ခုမှအမျိုးသမီး ၂ ခုသည်ရေတိုအိတ်ကပ်အိတ်ကပ်ဖြင့်အသက်ရှူနိုင်သောအားကစားဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ရှင်သန်နိုင်သည့်အေးမြ၊ သုတ်လိမ်းထားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းအေးဆေးတည်ငြိမ်စေသည်။ ဘေးထွက်တွင်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်တယ်လီဖုန်းအိတ်ကပ်ဒီဇိုင်းရှိသည်။ ခါးတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ သင်ထိတွေ့မှုကနေ။
123456 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁/၅၀